Muqdisho Oo Iftiintay Iyo Ciyaaro Sports Oo Xilli Habeen Ah Markii Ugu Horeysay Lagu Qabtay
Guddoomiyaha gobolka Banadir ahna duqa magaalada muqdisho Maxamuud Axmed Nuur Tarsan ayaa xariga ka jaray caawa mashruuc nalal cad ceeda ku shaqeey oo gobolka Banaadir ka hirgaliyay wadada Maka AL mukarama ee bartamaha Muqdisho.
Tartan ciyaaraha fudud ah ayaa lagu qabtay wadada Maka Al mukarama iyadoo markii ugu horeysay muddo 20 sanno kadib Muqdisho lagu qabtay xilli habeen ah ciyaar isboorti.
Xiriiirka ciyaaraha fudud iyo gobolka Banadir ayaa iska kaashaday tartankaan oo ay ka qeyb galeen ciyaartooy da’yar oo kala matalaysay 16-ka degmo ee gobolka Banaadir.
Mudane Tarsan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu mashruucaas bilaawday isla markaasna ay dowladda Norway gacan ka siisay maamulka gobolka Banaadir kaas oo ugu dambeyn caawa laga hirgaliyay halkas.
Tartan ayaa sheegay in Muqdisho ay ka baxday Mugdiga isla markasna ay cagta saartay sidii ay heeryada dhibaato ee ka muuqatay meesha laga baxsho isagoo sheegay in loo baahan yahay in bulshada Muqdisho ay ka shaqeeyaan Nabadda.
Si kastaba Muqdisho ayaa u muuqata inay horumar dhanka amaanka ah ay dareemayso kadib bishii August ee sanadkii tagay laga saaray dagaal yahanada Al Shabab kuwaas oo wadooyinka Muqdisho ka qoday godad waaweyn.
Xalay fiidkii ayey ahayd markii ay si la yaab leh u iftiintay Waddada ugu muhiimsan Magaalada Muqdisho ee Makka Al-mukarama halkaasoo si horu dhac ah lagu daah-furay Mashruuc xagga korontada ah oo laga hirgaliyey. Baallayaal waaweyn oo ileyska dabka ka qaadanaya Qorraxda kuna shaqeeya Aaladda Soler-ka loo yaqaan ayaa wadadaas oo horey u ahayd meel mugdi ah ka dhigay mid ifeysa oo maalin la moodo, waxaana Mashruucan maalgalisay Dowladda Norway oo ka mid ah dalalka gargaarka ugu badan siiya Somalia.
By Ahmed Mooge, deeyoo.com-Muqdisho. Latest News